UCarolina Molina. Udliwanondlebe nombhali weLos ojos de Galdós | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 28/07/2021 12:00 | Udliwano-ndlebe, Ababhali
Ukufota: UCarolina Molina, iprofayile kaFacebook.
UCarolina Molina, intatheli nombhali we inoveli yembali, wazalelwa eMadrid, kodwa unxulunyaniswe neGranada iminyaka. Ukusuka apho umsebenzi wakhe wokuqala uza kuphuma ngo-2003, Inyanga ngaphezulu kweSabika. Bayamlandela ngakumbi Mayrit phakathi kweendonga ezimbini, Albayzin amaphupha, Ubomi bukaIliberri o Abagcini beAlhambra. Y eyokugqibela yile Amehlo kaGaldós. Ndiyalixabisa kakhulu ixesha lakho nobubele bakho ngale nto udliwano ndlebe apho athetha ngaye nayo yonke into encinci.
UNCWADI NGOKU: Amehlo kaGaldós yinoveli yakho entsha, apho usuke khona kwimixholo yeencwadi zakho zangaphambili. Usixelela ntoni ngayo kwaye yavela phi le mbono?
I-CM: Ukususela esemncinci kakhulu, ukufundwa kukaGaldós kwakundikhapha rhoqo ehlotyeni. Ube sisalathiso sam kwinxalenye yam yaseMadrid, njengoFederico García Lorca kwinxalenye yam yaseGranada. Iminyaka esithoba okanye elishumi eyadlulayo umbono wokubhala inoveli malunga noDon Benito Pérez Galdós, umbhali wenoveli endandifunde ukubhala kuye, wandichukumisa. Injongo yam yayikukudala Inoveli yeGaldosian. Ukubonelela ngombono opheleleyo wehlabathi elalimngqonge: ukusondela kwakhe, ubuntu bakhe, indlela yakhe yokucacisa iinoveli zakhe okanye indlela ajongana ngayo nenkulumbuso yemisebenzi yakhe yeqonga. Ngoku ungaphezulu kwesalathiso, ungumhlobo ocingelwayo endihlala ndisiya kuye.
I-CM: Kutshanje, ekuhambeni, wabonakala ibali lam lokuqala. Kwakubhalwe kumaphepha ahlukeneyo ancangathi. Kwakulibali umama endixelele lona kwaye ndalilungisa. Ngaba iminyaka elishumi elinanye. Emva koko kwafika amanye amabali abantwana kwaye kamva iinoveli zokuqala, imibongo kunye nemidlalo yeqonga. Kwiminyaka emininzi kamva inoveli yembali yayiza kufika. Incwadi yokuqala endiyifundileyo yayi Abafazi abancinci. Ndifunde naye ukufunda, bendiya kuyo ngokuvakalayo kwigumbi lam.
I-CM: Emva, ngaphandle kwamathandabuzo. Andizukufumanisa nto intsha: ICervantes, uFederico García Lorca kunye noBenito Pérez Galdós. Omathathu anamanqaku amaninzi ngokufanayo kwaye ndicinga ukuba onke abonakalisiwe kwiincwadi zam.
I-CM: Matshi, de Abafazi abancinci. Xa ndifunda inoveli ndaziva ndichongwe ngayo kangangokuba kubonakala kum ukuba inento yokwenza nesigqibo sam sokuba ngumbhali.
CM: Andinangxaki kakhulu. Ndifuna nje cwaka, ukukhanya okuhle kunye nekomityi ye iti.
I-CM: Kude kube kutshanje elona xesha lilungileyo lokubhala belisemva kwemini, xa wonke umntu elele. Ngoku imikhwa yam itshintshile Andinaxesha limiselweyo. Akukho ndawo, nangona ngokubanzi ligumbi lokuhlala (apho ndinedesika yam) okanye kwithambeka.
I-CM: Kunjalo. Inkqubo ye- ibali (ibali elifutshane) kunye ye midlalo. Ndiyakuthanda kakhulu Isincoko sembali kunye biography, iintlobo endizifundileyo ndinomdla wokuzibhala.
I-CM:Ndifunda ezimbini Imbali yamabali, Umbhali-mbali waseGranada ovela kwi-s. I-XVI kunye nomntu onomdla kakhulu kwi-Renaissance yaseSpain. Andiwathethi amagama abo kuba iya kutyhila umxholo wenoveli yam elandelayo. Ndiqalile intetho ukuba Remedios Sánchez wenze kwimibongo UEmilia Pardo Bazán (Ukuphosa kulahlekile kulwandle olukhulu).
Ngokumalunga nale nto ndiyibhalayo ngoku, ndikwinqanaba lamaxwebhu, ndizinikezele kuwo lungiselela izishwankathelo, imizobo yoncwadi, kunye namabali emva koko ndincede ndijongane nenkqubo yokwenza inoveli. Lixesha elide kwaye elinzima kodwa liyimfuneko. Emva koko, ngalo naluphi na usuku olunikiweyo, isidingo sokubhala siza kuza emva koko kuqale owona mdlalo ubalaseleyo woncwadi.
AL: Ucinga ukuba imeko yokupapasha injani? Ababhali abaninzi kunye nabafundi abambalwa?
I-CM: Xa ndiqala ukubhala rhoqo Kwakucacile ukuba kufuneka ndipapashe. Inoveli ngaphandle kwabafundi ayinangqondo. Abanye ababhali baya kuthi bayazibhalela kodwa ubuchule bokwakha bufuna ukuba wabelane. Incwadi ibhaliwe ukunxibelelana nento, ke kufuneka ipapashwe. Kwandithatha iminyaka engamashumi amathathu ukupapasha. Ukuba ibali lam lokuqala lalineminyaka elishumi elinanye ubudala, ndapapasha inoveli yam yokuqala xa ndandineminyaka engamashumi amane. Phakathi ndandizinikezele kubuntatheli, ndandipapashe imibongo kunye namabali amafutshane, kodwa ukupapasha inoveli kunzima kakhulu.
Indawo yokupapasha iyafa. Ukuba bekungalunganga ngaphambili, ngokufika kwalo bhubhane uninzi lwabapapashi kunye neevenkile zeencwadi kuye kwafuneka luvaliwe. Kuza kusibiza imali ukuba sibuye kwakhona. Yonke into itshintshe kakhulu. Andiliboni ikamva elinethemba, ngokwenene.
I-CM: Ndiqale ubhubhane nge ukugula okunzima kosapho ukwamkela. Kwafika uCOVID ndaphinda ndanesinye isigulo esivela kwilungu losapho esasinzima nangakumbi. Iyiminyaka emibini inzima kakhulu apho ndibonakalise ndagqiba kwelokuba ndiphile ngendlela eyahlukileyo nangamanye amaxabiso. Luchaphazele uncwadi lwam nemikhwa yam. Into elungileyo kukuba abo bantu babini bagulayo baphilile ngoku, nto leyo ebonisa ukuba nanini na xa bevala umnyango bakuvulela ifestile. Mhlawumbi kwenzeka into efanayo nakwihlabathi lokupapasha. Kuya kufuneka silinde.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » UCarolina Molina. Udliwanondlebe nombhali weLos ojos de Galdós